Mmefu ahia na-agbanwe na ịchọ | Martech Zone
Anọ m na-ekwu na mpaghara Nkọ Mkpụrụ ihe omume na ịkọwa Ọchịchọ Inyocha Search na Web 2.0. Imirikiti nke ịde blọgụ azụmahịa na ịgafe na mgbasa ozi mmekọrịta maka ụlọ ọrụ ejirila Ngwaọrụ Search. O zughi iwu saịtị dị jụụ ma chere ka a chọta ya - ịkwesịrị ịme saịtị gị ịchọta ma choo ndi ozo di iche iche iji gbasaa okwu a.
Lee ụfọdụ Isi ihe sitere na nsonaazụ nyocha ahụ:
SEMPO eweputala nyocha taa na ngbasa ozi nchincha ihe. Ọ bụ ezie na ọnụọgụgụ ahụ siri ike, ma gosipụta agụụ maka ndị na-ere ahịa ka ha nọgide na-emefu na ọchụchọ, nyocha ahụ enweghị ike ịkọpụta nsonaazụ nke ụkọ ngwaahịa ọchụchọ (ọchụchọ) kpatara nnukwu nsogbu akụ na ụba.
Ego ahia na-agbanwe na ichota
Nchọpụta dị oke mkpa bụ na mmefu ahịa ọchụchọ na-abawanye na ụgwọ nke ibipụta akwụkwọ akụkọ mgbasa ozi, mmepe weebụsaịtị yana ọrụ ahịa ndị ọzọ, dị ka ndị ahịa na-agbanwe oke akụkụ nke ego ha na-emefu, na-eso ndị ahịa ka ha na-adaberewanye na engines ọchụchọ iji kụziere nyocha tupu ịzụta.
Nke a bụ nchọpụta dị mkpa:
Industrylọ ọrụ SEM North America toro site na $ 9.4 na 2006 ruo $ 12.2 na 2007, gafere amụma ndị mbụ nke $ 11.5 maka 2007
A na-eme atụmatụ imefu North America SEM ugbu a ka ọ na-eto $ 25.2 na 2011, karịa site na amụma $ 18.6 ijeri otu afọ gara aga.
Ndị na-ere ahịa na-achọta dollar nchọta site na mmefu ego site na mmefu magazin mbipụta, mmepe websaịtị, ozi ziri ezi na mmemme ahịa ndị ọzọ.
Kwụ ụgwọ kwụrụ 87.4% nke mmefu 2007; organic SEO, 10.5%; akwụ ụgwọ nsonye, ​​.07%, na ntinye teknụzụ, 1.4%.
Mgbasa ozi Google ka bụ usoro mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị ewu ewu, mana Google na Yahoo na-akwado ego ọchụchọ na-ebelata site na afọ gara aga.
Tags: f-azụmahịaazụmahịa facebookazụmahịa e-facebookecommerce facebooknnwale dị iche ichenkwusaSliderngwa ileba anyanlekota ngwa ngwanchọpụta nsogbu ọsọ
Emechara m gụọ akwụkwọ ntanetị atọ na-enye ndụmọdụ dị ịtụnanya nyocha ahia na web2.0 a na ha niile nwere onwe ha gwa m ma ọ bụrụ na nke a anaghị enyere ndị na-agụ akwụkwọ gị aka.
,, Ikekwe, nwere ebe kachasị njọ m hụtụrụla. O doro anya na ị na-anwa ịdọrọ okporo ụzọ nchọta ihe na saịtị gị site na ịtụba otu ederede ederede n'etiti. Atụrụ m anya na ị naghị achọ ịmịnye okporo ụzọ m.
My Cj stats ekwughi wezeemall bụ ihe kacha njọ saịtị.The comment m hapụrụ e bu n'uche iji nyere ndị na-agụ dị ka ọ dabara na isiokwu gị post b .ma ị na-nnọọ ka uche gị.
Naanị m chọrọ ijide n'aka na ị naghị atụfu njikọ iji gbalịa nweta uru ọchụchọ. Ana m arịọ mgbaghara maka ịkparị gị ma nwee ekele na ị gbakwunye na mkparịta ụka ahụ.
Isi okwu m na-aza bụ iji jide n'aka na ị 'dị adị' na ọ bụghị ụfọdụ spammer. Biko mara na anaghị m ewepu njikọ ahụ - Achọrọ m ịlele mbụ.
Ezigbo ozi dị na post gị. Anyị na-adụ ndị ahịa anyị na-azụ ahịa teknụzụ ọdụ ka ha lekwasị anya na ntanetị ha n'ịntanetị, ọchụchọ bụ ebe anyị malitere. Agbanyeghị, echere m na enwere nsogbu dị na iwepụ nnukwu ego na ọrụ azụmaahịa ndị ọzọ, ọkachasị mmepe weebụsaịtị. Site na weebụsaịtị dị ka isi nke usoro mmemme - na maka ịzụ ahịa dị elu nke dị ntakịrị nke enyere - ọ na-eju ọtụtụ saịtị na-adịghị arụ ọrụ. (Na m? Abụghị onye nrụpụta weebụsaịtị.)
O doro anya na okporo ụzọ bụ otu n'ime igodo atọ iji nweta ụba ego, yana ahịa ọchụchọ dị mma maka nke a. Mana ikike ịmegharị okporo ụzọ ahụ na ndị ahịa bụ nke abụọ, dịkwa mkpa dị mkpa.
Aghọtara m na post gị na-ezigara mmadụ ozi ọ bụghị ikwu okwu. Naanị iche ihe ị chere.